यो सत्तागठबन्धन चुनावपछि पग्लिएर बिलाउँछः अध्यक्ष ओली « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
प्रकाशित मिति : २०७८, २ आश्विन शनिबार १५:४५
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पाँच दलीय गठबन्धनलाई फ्रिजभित्रको आइसको संज्ञा दिएका छन् । शनिबार नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धन आगामी निर्वाचनपछि बिलाएर जाने बताएका हुन् ।
उनले भने, यो जनताप्रति उत्तरदायी सरकार होइन । चुनाव भन्दा प्रतिगमन भनेर पाँच दल डराएको सुन्नु भयो होला नि ? १४ महिनापछि त देश चुनावमा जानैपर्छ । के यो प्रतिगमन हुन्छ त ? चुनाव नगराई उपाय छैन । १४ महिनामा चुनाव हुन्छ ती कता हराउँछन् कता बिलाउँछन् । यी फ्रिजमा बनाइएका डल्ला हुन् । त्यहाँबाट निकालेपछि पग्लेर हराउँछन् ।’
आफूले देशलाई चुनावमा लैजाने निर्णय सही रहेको पनि उनले जिकिर गरे । उनले वर्तमान सरकार परमादेशबाट बनेकाले जनताप्रति उत्तरदायी नभएको आरोप लगाए ।
उनले संसदको सवैभन्दा ठूलो पार्टीको सरकारलाई ढालेर अदालतबाट परमादेश लिएर सरकार गठन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले माधव नेपालको पार्टी अवैध भएको बताए ।
उनले भने,‘हामीले पार्टीबाट निकालेका १४ जना कारबाही नगरेर निर्वाचन आयोग र सभामुखले तमासा गरे ।’ उनले कर्मचारीलाई घुस खान्न भनेर प्रतिज्ञा गर्न र सेवाग्राहीलाई राम्रो सेवा दिन आग्रह गरे । त्यस्तै उनले सरकारलाई भ्रष्टाचार हुन नदिन खबरदारी गर्न आग्रह गरेका छन् ।